नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): संविधानसभा विघटनपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक भेटघाटको क्रम बढाए यद्यपि पूर्वराजा स्वयंले भने यस विषयमा मुख खोलेका छैनन् !
संविधानसभा विघटनपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक भेटघाटको क्रम बढाए यद्यपि पूर्वराजा स्वयंले भने यस विषयमा मुख खोलेका छैनन् !
पूर्वपञ्चदेखि कांग्रेसका नेताले समेत पूर्वराजालाई भेटेर यस्तो सल्लाह दिए
काठमाडौं बाट प्रकाशित हुने सौर्य दैनिक लेख्छ : संविधानसभा विघटनपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक भेटघाटको क्रम बढाएका छन् । उनलाई भेट गर्ने नेताहरूमध्ये अधिकांशले नयाँ परिवेशमा आºनो भूमिका खोज्न सल्लाह दिएको स्रोतको दाबी छ । पूर्वपञ्चदेखि कांग्रेसका केही नेताले समेत पूर्वराजालाई भेटेर यस्तो सल्लाह दिएका हुन् । संविधानसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा ‘राजसंस्था’को सक्रियता बढाउनुपर्ने उनीहरूले बताउने गरेका छन् । यद्यपि, पूर्वराजा स्वयंले भने यस विषयमा मुख खोलेका छैनन् । संविधानसभा विघटनपछि उनी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको स्रोतले बतायो । जेठ १४ यता उनी कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा गएका छैनन् भने भेट्न आउनेहरूसँग खुलेर कुरा पनि गर्दैनन् । ‘खाली अरूका कुरा सुन्नुहुन्छ र टाउको हल्लाएर हो, हो भन्नुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो । पछिल्लो समय पूर्वराजालाई भेट्नेमा कमल थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, राजेश्वर देवकोटा, दुर्गा पोखरेल, याङकिला शेर्पालगायत केही शाहीकालीन मन्त्री छन् । यसैगरी, कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का, खुमबहादुर खड्का, तारानाथ रानाभाटलगायतले पनि उनलाई